I-Croissant (kusukela e-croissant eFrance) ngumkhiqizo obhakabhaka omncane owenziwe ngemvubelo, i-puff pastry. Yithandwa ikakhulukazi e-France, ama-croissants e-puff asetshenziselwa ukudla kwasekuseni nge-cocoa nekhofi.
I-croissants eminingi ihlotshaniswa nekusasa, ikhofi, i-Eiffel Tower nephephandaba lasekuseni. Ngempela, lo mkhiqizo webhakabhisi sekuyisikhathi eside ungomunye wamatshwayo amaningi eFrance, futhi lo mfanekiso unomlando othakazelisayo kakhulu. I-croissant-half-moon yokuqala yayilungiswa ngabakwa-bakers enhloko - dolobha yase-Austria. Uhlobo olukhethekile lokubhaka lwasungulwa ikakhulukazi umkhosi wokunqoba uMbuso wase-Ottoman. Ebusuku, usuku olulandelayo, ibutho loMbuso Wase-Ottoman lalifuna ukuhlasela lo muzi, kodwa abapheki baseVienna, abaqala ukusebenza kusengaphambili, baphakamisa ibutho bebona ukuhlaselwa. Ukuhlonipha umkhosi wokunqoba, babhaka ubunjwa obungavamile ngendwangu (inhlanzi ibonisa uMbuso wase-Ottoman). Ngakho-ke amaFulents ngokuvamile avame ukubhekisela kuma-croissants we-puff pastry njengama- pastries ase-Viennese.
Izitshalo zivame ukwenziwa nge-margarine, noma uhlanganise ibhotela nge-margarine. Imikhiqizo enjalo yokubhaka ngesimo se-bagel, i-bent encane. Futhi lezo eziphekwe ngamafutha - ifomu eliqondile. Izitshalo ezivela emanzini okugcoba angenawo ukugcwaliswa kanye nama-fillers. Isibonelo: ushokoledi, u-feta ushizi, ushizi nge-ham, ama-creams ahlukile , amakhemikhali, amakhemikhali kanye nezinye izigcawu. Izitshalo ze-puff pastry nge-filling - ukudla kwasekuseni okugcwele noma ukudla okunamnandi.
Indlela yokulungisa ama-croissants kusuka emgqonyeni we-puff
Ukuze ulungiselele kuyadingeka:
230 amagremu kafulawa + izipuni ezimbili ezi-2 zokufafaza;
10-15 amagremu of imvubelo fresh;
0.5 amathisipuni kasawoti;
120 amagremu we-margarine / ibhotela;
3 wezipuni ubisi.
Kudingeka ukuhlunga ufulawa wekolweni ibe isitsha esikhulu, bese usiqoqa ngesilayidi bese wenza i-groove encane phakathi. Enkomishini cindezela imvubelo bese ufaka kuwo amabili noma amathathu wezipuni zamanzi afudumele. Thela imvubelo ehlanjululwe ngamanzi emgodini, hlanganisa cishe ingxenye yesine yofulawa bese ugoqa ibhola. Bese usike isiphambano ebhola lesiphambano. Endishini, uthele amanzi afudumele bese ubeka inhlama lapho. Engeza ushukela, usawoti wobisi kanye nengxenye yamafutha ofulawa olusele, bese uhlangana ngokucophelela. Lapho inhlama ikhula futhi i-podymitsya kuyadingeka ukuyibamba bese uyomisa. Futhi-ke ukuhlanganiswa okunwebekayo nokunwebekayo ukuxubana nezinye izivivinyo. Ngemva kwalokhu, udlulisele epanini elifafazwe ufulawa bese ushiya endaweni epholile ubusuku. Ngomuso ekuseni uhlama ube ngecande futhi ubude, ukuhlukanisa ngengqondo ibe izingxenye ezintathu ezilinganayo. Awudingi ukugcoba ingxenye ephakathi ngamafutha, bese ugcoba okunye ngendwangu encane yamafutha. Gweba inhlama kathathu. Bese uyigubha ngesimo sombuthano bese uyisika ezincekeni ezingu-8 ezifanayo. Qinisekisa ucezu ngalunye ukusuka phezulu kuze kube phezulu, ulibeke ebhokisini lokubhaka bese ubhake imizuzu emi-5 ngezi-220 degrees. Bese wenza ukushisa okuphansi kuze kube ngu-200 bese ubhaka kuze kuphekwe. Ungenza futhi ama-croissants emgqeni owenziwe ngomumo, nje uwenze ube ngumbuthano, usike ube yizicucu ezingu-6-8 uphinde uwubeke esimweni se-bagel. Bhaka ku-degrees 220, bese u-200.
I-Lactose - iyini?
Iholide Orthodox ka 24 Agasti. Yini celebration ngo-August 24?
Baked ushizi kuhhavini: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi izithombe